पोखरा पर्यटन परिषद् मा मेरो आगमन : चिरञ्जीवी पोखरेल
By ourtourism news On : November 6, 2018
पर्यटन क्षेत्रमा विगत लामो समय देखि सक्रिय भूमिका निर्वाह गदै आउनुभएका तथा पोखरामा रहेका १२ वटा पर्यटनसंग सम्वन्धीत संस्थाको छाता संगठन पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष चिरञ्जीवी पोखरेलसंग वर्तमान पर्यटन क्षेत्रको बारेमा आओर टुरिजम न्युजका सम्पादक टंक रेग्मीले गर्नु भएको कुराकानी ः
पोखरा पर्यटन परिषद् कस्ताे संस्था हाे ?
पोखरा पर्यटन परिषद् पोखरामा रहेका पर्यटन संग सम्वन्धीत विभिन्न १२ वटा संस्थाहरुको छाता संगठन हो । यसका सदस्य संस्थाहरुमा पोखरा उद्योग वाण्ज्यि संघ, पश्चिमाञ्चल होटल संघ, टान, नाट्रा, रेवान, टे«किङ इकुमेन्ट सफ, इम्र्बोडि एण्ड गार्मेन्ट, एन एम ए, भिटोफ, पर्यटन यातायत समिति, ट्याक्सी व्यवसाय समिति आवद्ध छनछ् ।
पोखरा पर्यटन परिषद्को मूख्य काम के हो ?
पोखरा पर्यटन परिषद्को काम पोखरामा रहेका पर्यटनसंग सम्वन्धीत विभिन्न १२ वटा संस्थाका वार्षिक कार्यक्रमहरुलाई समन्य गरेर सबैका साझा कार्यक्रमहरुको रुपमा रुपान्तरित गर्ने, अथवा सबैको अपनत्व हुने काममा परिषद्को महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । पोखरा पर्यटन परिषद्ले राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय रुपमा पर्यटन प्रर्वद्धनको लागि पोखरामा रहेका पर्यटकीय स्थानहरुको प्रर्वद्धन गर्ने, राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रजार प्रसार गर्ने काम गर्दछ । परिषद्ले पर्यटन संग सम्वन्धीत निति नियमहरु निर्माण गर्नको लागि नेपाल सरकार र व्यवसायीहरु बिचमा छलफल चालाएर पर्यटन मैत्री निति नियम बनाउने काम गर्दछ । पर्यटनका आकर्षणका रुपमा सम्भावित गन्तव्यहरुको पहिचान गरि बिकास गर्ने, संरक्षण गर्ने काम पोखरा पर्यटन परिषद्ले गर्दछ ।
पोखरा पर्यटन परिषद्को अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ ? अब परिषद्लाई कसरि अगाडि लैजानुहुन्छ ?
म पोखरा पर्यटन परिषद्मा लामो देखि काम गरिसकेको छु । यस अघि यस संस्थाको कोसाध्यक्ष, महासचिव, उपाध्यक्ष हुदै अहिले अध्यक्षमा निर्वाचित भएको छु । यसले गर्दा पोखरा पर्यटन परिषद्ले पोखराको पर्यटन प्रर्वद्धनका लागि कुन खालको भूमिका खेल्नु पर्दछ भन्ने बारेमा सपष्ट छु । पर्यटन प्रर्वद्धन गर्नुपर्ने कामहरुलाई व्यवस्थित गर्ने, पोखरा पर्यटन परिषद् आर्थिक रुपमा कमजोर छ यसलाई भरपदो र दिगो संस्था बनायनको लागि भरपदो आर्थिक स्रोतको खोजी गर्ने मेरो योजना रहेको छ ।
पछिल्लो समय पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको नकारात्मक प्रवृतिलाई सुधार गर्न के गर्नु पर्ला ?
पछिल्लो समय पर्यटन क्षेत्रमा फेक रेस्क्यूले केहि नकारात्मक कुराहरु फैलिएको छ । यसले पर्यटन क्षेत्रमा केहि असर गरेको हो कि भन्ने छ । फेक रेस्क्यूको नाममा बढी पैसा लगिनु भनेको देश दे्रहि काम हो । यो पैसाको लागि दिउँसै डकैति गर्ने प्रवृतिबाट नेपाली पर्यटन व्यवसायीहरुले गर्न नहुने काम केहि व्यवसायिहरुले गरे जसले गलत काम गरेको छ यसलाई नेपाल सरकारले कानूनी दायरामा ल्यानै पर्दछ । र कडा भन्दा कडा कार्वाहि गर्नु पर्दछ । गलत काम गर्ने कलंकहरुले गरे पनि नेपालको पर्यटन कलंकित बन्नु हुदैन । यसदे आफ्नो दिश निर्दिष्ट गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ । अगाडि बढ्दा आउने कलंकहरुको पहिचान र तत्काल कार्वाहि गर्ने , नेपालको पर्यटन गलत गर्ने मान्छेहरुका मा हातमा छैनन , गलत गर्ने मान्छेहरुलाई नेपाल सरकारले कार्वाहि गर्यो भनेर सबैलाई सन्देश दिने र अन्तराष्ट्रिय बजारमा एउटा विश्वासको वातावरण दिने कुरामा नेपाल सरकार लाग्नु पर्दछ ।
सरकारले सन् २०२० सम्म २० लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष लिएको छ । के यो सम्भव छ ?
केन्द्र सरकारले सन् २०२० सम्म २० लाख पर्यटक नेपाल भित्राउने लक्ष लिएको छ यो सम्भव छ । हामीले सपना देख्दा महत्वकाक्षी भएर देख्नु पर्दछ । र त्यो सपानालाई पुरा गर्नको निम्ती अलि सक्रियताका साथ अगाडि बढ्नु पर्दछ । नेपाल सरकारले २० लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष पुरा गर्नको लागि सरकारका गतिविधीहरु सक्रिय भएका छैनन । निजि क्षेत्र, नेपाल पर्यटन वोर्ड र सरकार विच एक आपसमा तारतम्वय मिलेको छैन त्यसलाई जति सक्दो चादो सरकारले निजि क्षेत्रलाई समेट्नु पर्दछ । सरकारले नेपाल सरकार मातहतका विदेशी कुटनितिक नियोगहरुमा पर्यटन प्रर्वद्धन गर्न अलगै डेक्स निर्माण गर्नु पर्दछ । एनआरएनका रुपमा विदेशमा रहेका संघ संस्थालाई उपयोग गर्नु पर्दछ । यति गरेमा सरकारको २० लाख लक्ष्य पुरा हुन सक्छ । हाम्रा लागि यो फाईदाजनका हो । सरकारले आफ्नो लक्ष्य पुरा गर्न निजि क्षेत्र संग सहकार्य गर्नु अहिलेको अपरिहार्य छ ।
Previous Post Previous post: वडा नं १७ को आयोजनामा शुभ कामना तथा बिकास निर्माण योजना सार्वजनिक, धार्मिक तथा पर्यटन प्रबर्धन गर्ने
Next Post Next post: पशुपति र लुम्बिनी ‘वल्ड बुक्स रेकर्ड’ मा सूचीकृत